Ngabe ukuguquka kwesimo sezulu kuyithuba lokuzuza kwezomnotho? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngabe ukuguquka kwesimo sezulu kuyithuba lokuzuza kwezomnotho?
Njengoba sekubonile kwezinye izindatshana ezikhuluma ngokukhula komnotho kanye nokuguquka kwesimo sezulu, kunabantu ababona lesi simo somhlaba wonke njenge ithuba lokukhulisa umkhiqizo nokukhuthaza ukukhula komnotho kwamazwe. Lokhu kucatshangwa yisazi sezomnotho saseBrithani uDimitri Zenghelis.
Ngabe lesi sazi sezomnotho sincikephi ekucabangeni ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kuyithuba lokukhula kwezomnotho futhi singakuboni njengosongo lomhlaba wonke?
1 Umnotho kanye nokuguquka kwesimo sezulu
2 Izinzuzo zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu
3 Misa ukuguquka kwesimo sezulu ngesikhathi
Umnotho kanye nokuguquka kwesimo sezulu
UDimitri Zenghelis Ungu-Co-Director weNqubomgomo e-Grantham Research Institute eLondon School of Economics futhi ukholelwa ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kuyithuba lezomnotho lokukhula. Ebhekene nesidingo esikhulayo soguquko lwamandla olususelwa ku-decarbonisation kanye nasekusebenziseni amandla avuselelekayo, uDimitri ucabanga ukuthi ukubheja ngamandla ahlanzekile nokusebenza kahle kwamandla silethe izinzuzo zezomnotho ezweni.
Izici zezomnotho okufanele zibhekwe njengokushesha kokuqamba nokukhiqiza, ukwanda kolwazi, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe obusebenza kahle kanye nokwanda komkhiqizo emikhakheni yezomnotho ngokwendabuko kungadala ukwakhiwa kwamathuba emisebenzi amasha futhi amaholo angcono.
Ngendlela "yempi ebandayo", isintu sibhekene nesimo lapho Ukuguquka kwesimo sezulu 'kufaka ingcindezi' kubantu ukwakha ubuchwepheshe obudingekayo bokuzivumelanisa nezimo. Ngakho-ke, zonke izimpikiswano u-Dimitri azibeka phambili zingena ku-Economics of Climate Change. Lesi siyalo sivikelwa nguthisha njengesenzo esiqukethe "ukubeka izandla kulolu daba" nokukwazi ukubhekana nezimo zokwehlisa izingozi zamanje nezesikhathi esizayo ezonyusa amazinga okushisa eziletha futhi uzixube nendlela enhle yokusebenza equkethe izindleko eziphansi ukuvimbela nokunciphisa lezi zinkinga.
Izinzuzo zokulwa nokuguquka kwesimo sezulu
UDimitri akasho ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu umcimbi lapho kungaba khona inzuzo yezomnotho uqobo, kodwa ukuthi ukuboshwa kwakhe kungasiza ekukhuleni komnotho emazweni amaningi, kusukela ngalesi sikhathi inani labantu liphoqeleka ukuba likhule futhi likhule ngendlela engalimazi isimo sezulu.
Kuze kube manje, indlela eqondile yokukhiqiza igcinwe: ukungcolisa ukuze kukhiqizwe futhi kukhule ngokomnotho. Ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kwezwe kuhlobene kakhulu ne-GDP yayo. Lokho wukuthi, amazwe acebile atholakalayo ukukhula kweGDP minyaka yonke kuphakeme njengoba ukukhishwa kwegesi yokushisa okushisa kuphezulu. Kodwa-ke, esimeni lapho kunesidingo sokunciphisa imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, lokhu akumele kube njalo.
Lesi sazi sezomnotho sigxile kakhulu ezinzuzweni ezisungulwa yimishini emisha kunezindleko okukuso.
"Ukuthi ukushintsha kwesimo sezulu kungasho ukuthini yinsimu engaziwa ngabantu yingakho kunzima ukubala futhi wazi ukuthi kuzokwenzekani ngempela," kuchaza yena.
Misa ukuguquka kwesimo sezulu ngesikhathi
Vele, njengoba kufanelekile, zonke lezi zinzuzo zezomnotho zingatholakala inqobo nje uma zitholakala esikhathini esifushane. Lokho kusho ukuthi, Ukuguquka kwesimo sezulu kuyinkinga yangempela futhi kudinga ukunyamalala kwayo ngokushesha okukhulu. Ngakho-ke, kuyadingeka ukubhekana nazo zonke lezi zinkinga ngesikhathi.
Iningi lemikhakha yendabuko yezomnotho selivele liyibalile imali ezobabiza ngayo ukuze bakwazi ukuguqula zonke izinhlobo zabo zokukhiqiza kulesi simo esikhona manje futhi bayazi ukuthi yibaphi osopolitiki abangabaphoqa ukuthi benze lolu shintsho.
Izinkinga ezinkulu ezibhekene nalesi simo ukumelana noshintsho kumamodeli wokukhiqiza nezinkinga zokubala. Lokhu kwenza isiyalo sithathe isikhathi eside ukusisebenzisa, ngoba sonke sivame ukuthenga okungabizi kakhulu, ngaphandle kokucabanga ukuthi kungcolise kangakanani ekukhiqizeni kwayo. Futhi asiboni ukuthi yiliphi ibhange elitshala imali kumaphrojekthi aluhlaza.
Ngakho-ke, kudingeka ibhizinisi langaphandle ukusiphoqa ukuthi sifeze lokho kuguquka kwezomnotho okungaba, kulokhu, ukuguquka kwesimo sezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Ngabe ukuguquka kwesimo sezulu kuyithuba lokuzuza kwezomnotho?
Izinhlayiya zemvelo zomkhathi zinciphisa izinga lokushisa komhlaba
Ukuqhekeka kweqhwa elimpunga njengophawu lokushintsha kwesimo sezulu